Eat in Myanmar ရဲ့  booking တင် ပြီး သွားစားရင် 10% discount ရမယ့် အစီအစဉ် – Mr. Discount
foodie လေးတို့အတွက် eat in Myanmar ကနေ booking တင် ပြီး သွားစားရင် discount ရမယ့်ဆိုင်လေးတွေ ပိုများလာအောင် ကြိုးစားနေတာ ခုဆိုဆိုင်သစ်လေးတစ်ဆိုင်ထပ်တိုးလာပါပြီနော်
Seafood ချည်းပဲ သီးသန့်တလိုင်းစားချင်တယ်ဆိုရင် ဝေးဝေးလံလံလိုက်ရှာစရာမလိုပါဘူး ကန်တော်ကြီးထဲက မျှော်စင်ကျွန်းနားလေးမှာ Seafood Tower ဆိုတဲ့ Seafood ဆိုင်အသစ်လေးဖွင့်ထားတာ မကြာသေးဘူးရယ် . . . 🤗 eat in Myanmar ကနေ booking တင်ပြီးသွားမယ်ဆိုရင် Signature Dish ပေါ်မှာ 10 % discount ရမှာဆိုတော့ walk in သွားတာထက် booking တင်ပြီးသွားရင် ပိုသက်သာတာပေ့ါဗျာ 😍
admin တို့ အုပ်စုလည်း ကန်တော်ကြီးထဲက Seafood Tower Restaurant ကို food tasting လေးလုပ်ရင်း review ရေးဖို့ ချီတက်ခဲ့ကြတယ် . . . Tasting ပိုင်းသိချင်သူတွေကို ပြောပြမယ်နော် ✌️ကြက်သွန်မွှေးကြက်ခြေထောက်၊ မာလာဂဏန်းမွှေးကြော် ၊ ထိန်ကျောက်ငါးဟင်းရည်တွေက မာလာအရသာထုံစပ်လေး . . . 🌶️ တစ်ခုရှိတာက ကိုယ်က ဟွားကျောင်းအရသာ အရမ်းမစားနိုင်ဖူးဆိုရင်တော့ မှာကတည်းက လျော့ခိုင်းထားဖို့လိုတယ်နော် 🙂 ထိန်ကျောက်ငါးဟင်းရည်ထဲမှာဆိုရင် အစေ့လိုက်ကို အားပါးတရထည့်ပေးထားတာဗျာ . . . ပုစွန်စပိုက်ကြော်ကတော့ မွှေးမွှေးလေးနဲ့အရမ်းမစပ်ဘူး နေ့လည်ဖက် ကန်တော်ကြီးထဲရောက်လို့ တစ်ယောက်စာကွက်တိ ဗိုက်ကလေးဖြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Seafood Tower Meal လေးရှိတယ် 🍚 🍹ထမင်းကြော် ( ကမာကင် ) + သစ်သီးဖျော်ရည် ရယ် set လေးပေါ့ ပူပူစပ်စပ်တွေ စားပြီးတဲ့ခါ သစ်သီးစစ်စစ်ဖျော်ရည်လေးသောက်တော့ အစပ်ပြေတာပေါ့ 😁ဒီ set လေးက နေ့ခင်း ၁၂နာရီကနေ ညနေ ၄ နာရီအချိန်အတွင်းပဲရတာနော် set မယူပဲ သီးသန့် တစ်ခုစီမှာလည်းရတယ် ပုစွန်ဂဏန်းတွေ စားလို့ရိုးနေပြီဆိုရင်တော့ ကမာစပိုက်ဂုံးကင်လေးတွေလည်း ရှိတယ်ဗျ ပျော်ပျော်ပါးပါးအုပ်စုလိုက် Seafood ၀ိုင်းဖွဲ့စားချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Seafood Tower ရဲ့ Signature Dish ဖြစ်တဲ့ Seafood Tower ( အဏ္ဏ၀ါစုံပေါင်း )လေးလည်းရှိတယ်ဗျာ eat in Myanmar ကနေတဆင့် booking တင်ပြီးသွားမယ်ဆိုရင် Signature Dish ဖြစ်တဲ့ Seafood Tower ( အဏ္ဏ၀ါစုံပေါင်း ) ကို 10 % discount ရမှာပါနော်
🏠 Address ( 1 )Kandawgyi Nature Park, Near Myaw Sin Kyun
📌 📌 📌 EIM DISCOUNT:10 % off on Signature Dish 🤑 🤑
eat in Myanmar ကနေ booking လုပ်ပြီးသွားရင် <<< Signature Dish 10% discount >>> ရအုံးမှာနော်
ဘွတ်ကင်လုပ်မယ်ဆို ☎️ 09 – 788 129 557 ကိုဖုန်းခေါ်လို့ ရပါတယ်
ဆိုင်ရဲ့ Menu နဲ့ အခြားဟင်းပွဲပုံတွေကြည့်မယ်..ပြီးရင် ဘွတ်ကင်လဲလုပ်မယ်ဆို >>>http://eatinmyanmar.com/restaurants/seafood-tower
eat in Myanmar ရဲ့ Android Mobile App Download လုပ်မယ်ဆို >>>https://play.google.com/store/apps/details…
Facebook Link : https://www.facebook.com/eatinmyanmar/posts/1061172064022555
Website Link : eatinmyanmar.com
Eat In Myanmar မှ ဤ Discount သည် အထိသာဖြစ်ပြီး Discount တွင် Usage နှင့် Terms & Conditions များရှိနိုင်သည်။
ဖော်ပြပါ Discount အား ဤ website တွင် စတင်ထဲ့သွင်းဖော်ပြသော နေ့ မှာ March 16, 2018 ဖြစ်ပြီး Eat In Myanmar မှ အချိန်မရွေးပြောင်းလဲနိုင်သည်။
ဤ Discount အစီအစဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ အငြင်းပွားဖွယ်ရာ တစ်စုံတစ်ရာဖြစ်ပေါ်လာပါက Eat In Myanmar ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်သည်သာ အတည်ဖြစ်သည်။
Our Esperado Rooftop Restaurant going to give 10% Off on Weekly Buffet